ONLINE ADVENTIST MATRIMONAL MEDITATION - Fanavaozana ny ara-panahy isan'andro
FAHASALAMANA ADVENTIST MATINALY ONLINE
Fanavaozana ara-panahy isan'andro
Ny Meditation vehivavy
Fanentanana ho an'ny tanora
Windows ho an'ny fiainana
Meditation an'ny ankizy
Fitiavana zanaka - I
Fitiavana ny Devoly - II
Child Devotion III
Tonga soa eto amin'ny NY TRANONKALA HOSAINTSAININA odiambavafo advantista mitandrina ny ONLINE!
Hatrany by: Thiago Amaral de Oliveira - Baixo Guandu / ES - Hatramin'ny Aprily 21 2018 / Contacts: (027) 99777-2514 - Vivo / (027) 98155-2234 - Tim
Posted in 12 2018 ho an'ny Septambra ny misaintsaina
2019 Fanentanana ho an'ny tanora - Fiainana velona
Posted in 22 Aogositra 2018 ny misaintsaina
Fanavaozana ny fanentanana tanora tanora 2001 Ny mpitandrina sy ny mpanao gazety Francisco Lemos dia naman'ny natiora ary mpikaroka tsy mety miala amin'ny lesony. Teraka tao Itabuna, Bahia, ary nanolo-tsaina manokana
Fitiavana kely - 2019 Children's Devotional
Posted in 22 Aogositra 2018 22 Aogositra 2018 ny misaintsaina
Manana zavatra mahaliana sy mahaliana maro nataon'Andriamanitra ho antsika izao tontolo izao. Ohatra, nahoana ny volonao no tsy mitovy amin'ny volon'ny sakaizanao? Avy aiza izy ireo
Ny Meditation vehivavy 2019 - Hevitra
Fantatrao ve fa mihetsiketsika miaraka aminao Andriamanitra? Mahatsiaro anao fotsiny izy, mifaly amin'ny fihobiana izy. Ity fivoriam-be ity dia feno tantara izay mankalaza ny fifandraisana tsara eo amin'ny
2019 Daily Meditation - Fanantenana
Posted in 22 Aogositra 2018 29 Aogositra 2018 ny misaintsaina
Ny fanantenana dia ny fifohazana nofinofy iray. Izy io dia vokatry ny fampanantenana iray, ny voa nambolena tao amin'ny tanin'ny fo voahofana amin'ny finoana. Ny fanantenana dia manandratra ny masontsika,
Fantaro isan'andro izay tian'Andriamanitra holazaina aminao! Araho ny fanoloran-tenanao efa ela. Facebook Comments
2018 - Mitombo miaraka amin'i Jesosy
Posted in 21 Aprily 2018 4 May 2018 ny misaintsaina
Saika ny ankizy rehetra dia te ho lehibe. Mazava ho azy, te-hivoatra ihany koa ianao. Saingy ny zavatra tsara dia rehefa mitombo amin'ny lafiny rehetra isika. Ny Baiboly milaza fa ny
2018 - Kivy be
Ny fisaintsainana ny filentehan'ny masoandro dia naorina nandritra ny taona farany ho toy ny singa tena ilaina amin'ny fandraisana ny Sabata. Izay no nahatonga izany ho an'ny isa tsirairay
Ho an'ny fotoana tsara indrindra - 2018
Posted in 7 Aprily 2018 4 May 2018 ny misaintsaina
Fantaro ireo devotion vaovao izay hampatanjaka ny fahasamihafan'ny fianakaviana ao amin'ny 2018 Ny lalan'ny fiainana kristiana nandresy dia manomboka amin'ny fiombonana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra. To help make
Fanentanana ho an'ny tanora - eritrereto tsara 2018
Posted in 28 Febroary 2018 4 May 2018 ny misaintsaina
Ny zavatra rehetra ataontsika dia vokatry ny eritreritsika. Noho izany, ny fisainana mahitsy dia ny miafina amin'ny fahombiazana. I Solomona, ilay hendry indrindra teto an-tany, no nahalala izany. Notarihin'Andriamanitra,
Woman Meditation 2018 - Fitiavana mandrakizay
Ny devotional izay nosoratan'ireo vehivavy izay niaina ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny lafiny maro amin'ny fiainana. Ary tiany ny hizara aminao ny fahatsapana mahatalanjona ny maha-izy azy
2018 Daily Meditation - Andro tsy hay hadinoina
Andro maromaro no manamarika ny fiainana mandrakizay, izy ireo dia ny ranon'ny reniranon'ny fisiana. Raha rindrina ny fiainana, dia ho lasa biriky ny andro. Eo amin'ny rindrin'ny tantara
Fikarohana farany farany
Mpandika tenin'ny fiteny
Tsidiho ny tranokala an-tserasera
Fitaovana Devocionais 2019
Forecast of Eo ambany Guandu / ES omaly CPTEC / INPE
Ankafizo ny Radio Young Hope
Torolalana ho an'ny Sekoly Sabata fohy